Heerka burburi Candy 3914 khiyaamo iyo talooyin - Ciyaarta Suugaanta Shumaca - Talooyin Khayaanada Nolosha Bilaashka ah Tilmaamaha
halkan ayaad joogtaa: Guriga / Uncategorized / Heerka burburi Candy 3914 khiyaamo iyo talooyin
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay Julaay 6, 2021 By Isabella Franks Faallo u dhaaf
Sagaashameeyadii waxaan maqli jirnay nasasho, haysta KitKat! Weedhan hadda waa in la beddelaa si loo helo nasasho si loogu ciyaaro burburinta nacnaca. Ciyaartan ayaa noqotay mid aad caan u ah dhamaan kooxaha da'da oo aadan cidna ka fogayn karin. Waxaa maalinba maalinta ka danbaysa sii kordhaya xiisaha ciyaarta. Marka aad dhex gasho talefanka qof kasta waxa hubaal ah in aad heli doonto codsigan. Qof ayaa joogi lahaa heerka bilowga; kuwa kale ayaa ku fiicnaan lahaa laakiin waad ogtahay waxa noqon lahaa dhinaca ugu caansan? Qof kastaa wuxuu ku xayirnaan lahaa heer go'an. Waxay raadin lahaayeen tilmaamo ka caawin kara inay heerkan ka gudbaan. Markaa halkan ayaanu ku keenaynaa Heerka Nacnaca Crush 3914 khiyaamo iyo talooyin caawimadaada.
Fikradda ka dambeysa heerkan ayaa ah in la hoos u dhigo dhammaan maaddooyinka heerkan ku jira oo la gaaro heerkii ugu sarreeyay 20,000 dhibcood si loo dhamaystiro heerkan. Tan awgeed, way ku soo bandhigeen 25 dhaqdhaqaaqyada aan badnayn ee ka taxdar marka aad samaynayso? Guud ahaan waa inaad wax ka qabataa 2 maaddooyinka. Hadii aad gool dhaliso 20,000 dhibcood oo hoos u dhig dhammaan noocyada labadaas maaddooyinka, markaa adiga kaliya ayaa awoodi doona inaad heerkan dhammayso oo aad dhammayso welwelkaaga. Si aad uga gudubto welwelkaaga, waxaanu ku siinaynaa khiyaamo iyo talooyinka burburinta nacnaca 3914.
Talooyin iyo tabo
Xasuusnoow heerka dhibtu waa adag tahay markaa waa inaad suulashaada saartaa markaad tan ciyaareyso. Fikradda ugu fiican ee ka timid heerka burburin nacnaca 3914 khiyaamo iyo talooyin Waxay noqon doontaa in laga bilaabo gunta hoose ee looxa sababtoo ah waxay kaa caawin doontaa inaad hesho nacnac gaar ah oo dheeraad ah. Waxaad isticmaali kartaa nacnacyada xariijimaha leh si aad uga takhalusto maaddooyinka ku jira sabuuradda.
Tallaabadaada ugu horreysa waa inay noqotaa inaad u dhaqaaqdo inaad jebiso waffle-yada intii suurtagal ah. Isku day inaad maaddooyinka u rarto tiirarkooda midig.
Markaad taas sameyso waxaad u baahan tahay inaad sameyso nacnacyo gaar ah. Isku qas dhammaan nacnacyada gaarka ah ee aad samaysay oo isku day inaad jebiso dhammaan likoriga, rogrogo, shukulaatada iyo waffles.
Fikradda ka dambeysa in la jebiyo waxaas oo dhan si loo soo dejiyo dhammaan maaddooyinka bidix ilaa hoos midig. Sidoo kale, waxaad doonaysaa in maaddooyinka kale ay sidoo kale ka guuraan bidix sare oo ay u socdaan dhinaca midigta. Markaad tan sameyso waxaad awoodi doontaa inaad ka takhalusto iyaga oo ku jira guddiga.
Haddii aad ka heli karto maaddooyinkan ka fog guddiga gudaha dhaqdhaqaaqyada la sheegay ie. 25 dhaqaaqdo, markaa adiga kaliya ayaa buuxin kara heerka. Haddii aadan tallaabo-tallaabo u dhaqaaqin waxaad ku sii jiri doontaa heerkan muddo dheer. Keen dhammaan maaddooyinka dhinaca midigta ah si aad uga saarto nacnacyada gaarka ah. Miyaanay sidan fudud ahayn? Kaliya isticmaal talooyinka aan ku bixinnay maqaalkan oo arag sixirka. Waxaad awoodi doontaa inaad hal mar ku xalliso heerkaaga. Tani waa quruxda khiyaamadayada.